Masaka jijjiirtuu Euro
Faayiloota cufaman qofaatu jijjiiramu. Galmee LibreOffice Calc banaa keessatti jijjiirtuu Euro fayyadamuun ni danda'ama. Haala kana keessatti, qaaqni adda ba'aan ni banama. Qaaqni kun xumura kutaa kanaarratti ibsameera.
Faayilii - Masaka - Jijjiiraa Yuuroofiladhu
Maalaqa Biyyoota gamtaa maallaqa awurooppaa keessatti hirmaatanii qofaatu jijjiirama.
Galmee LibreOffice Calc qeenxee
Galeeloo maddaa / galmee maddaa
Cita ukaankaa dabalatee
Dirreewwanii fi gabateewwan galmeewwan barruu keessaa dabalataan jijjiira
Gatiiwwan galmee barruu keessaa kanneen dirreewwan ykn gabateewwan keessa hin jirre , hin jijjiiraman.
Gaafataa malee waraqaa yeroodhaaf hin eegu
Yeroo jijjiirraa, fuulli agarsiistuu itti fufiinsaa ni mul'ifama.
Qaaqni Euro jijjiiru faankishinoota armaan gadii of keessaa qaba:
Hangii kana keessatti mandheewwan jijjiiruu barbaaddu fili, yoo halojii galmee mara keessaa mallatteessuu baatte. Dirqala filiitii galtuuwwan qajojiiwwandirree/ hangiiwwan maallaqaa keessaa barbaachisoo cuqaasi. Hangii filatamaan akkuma galmee keessaatti mul'atu. Jijjiirraa raawwachuuf jijjiiricuqaasi.
Mandheewwan maallaqaa waraqaa ammee keessaa
Man'eewwan maallaqaa galmee guutuu keessaa
Qajojiiwwan / Hangiiwwan mallaqaa
Title is: Masaka jijjiirtuu Euro